Yintoni ongayibona kwiPicos de Europa: Izimangaliso zendalo kunye neelali ezintle | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 10/09/2021 11:00 | Ukhenketho lwezendalo, España
Thetha nge yintoni ongayibona kwiPicos de Europa kukwenza ubuhle bendalo entle, iilali ezizele ngumtsalane kunye neendlela ezintle zeentaba. Konke oku kuninzi kakhulu kuloo ntaba iphakamileyo kangangokuba kunzima kuthi ukuba sikulungiselele.
Yinto ye Iintaba zeCantabrian, I-Picos de Europa lulwakhiwo olukhulu lwelitye lekalika oludlulela kumaphondo aseLeón, eCantabria naseAsturias. Ngokunjalo, uninzi lweendawo zayo zidityanisiwe Ipaki yeSizwe yePicos de Europa, Okwesibini kutyelelwa kakhulu eSpain emva koTeide, kwisiqithi saseTenerife (apha sikushiya inqaku malunga nale paki yaseCanarian).
1 Yintoni onokuyindwendwela ePicos de Europa: Ukusuka kwimimango emangazayo ukuya kwiilali zesintu
1.1 ICovadonga kunye namachibi
1.2 IPoncebos kunye neGarganta del Cares, omnye ummangaliso
1.3 Bulnes kunye ne-Urriellu
1.4 Umwonyo weHermida
1.5 I-Santo Toribio de Liébana Monastery
1.6 Iipotes, omnye umangaliso wokuwubona kwiPicos de Europa
1.7 Umthombo we
Yintoni onokuyindwendwela ePicos de Europa: Ukusuka kwimimango emangazayo ukuya kwiilali zesintu
I-Picos de Europa yenziwe ngamatye amathathu: empuma okanye UAndara, embindini okanye iiUririele nasentshona okanye Ikona. Asinakuxelela ukuba yeyiphi eyona intle, kodwa sinokukuxelela ngotyelelo olubalulekileyo ekufuneka ulwenzile kuzo zonke. Makhe sizibone.
ICovadonga kunye namachibi
Indawo yasebukhosini yaseCovadonga
Ukuba ufikelela kwiPicos de Europa ngokuthi ICangas de Onís, ikomkhulu lobukumkani base-Asturias kude kube ngumnyaka we-774, uya kufikelela kwintaba ye ECovadonga, indawo yokunqula yamakholwa kunye notyelelo olungenakuphepheka kwabo bangekho ngenxa yesandi sayo sentsomi nesembali.
Kwi esplanade enkulu, uya kuyifumana I-Basilica yaseSanta María la Real de Covadonga. Kwaye naye I-Monastery yaseSan Pedro, Esi sisikhumbuzo seMbali yobuGcisa kwaye esigcina izinto zaseRoma. Kwinxalenye yayo, Icawa yaseRoyal Collegiate yaseSan Fernando Kususela kwinkulungwane ye-XNUMX kwaye yonke igqityiwe ngumfanekiso wobhedu we Pelayo, i-obelisk ene-Cruz de la Victoria, uphawu lwe-Asturias, kunye nento ebizwa ngokuba yi "Campanona", ineemitha ezintathu ukuphakama kunye ne-4000 kilograms zobunzima.
Kodwa, ngakumbi amakholwa, undwendwelo Umqolomba ongcwele, apho inani le- Intombi enyulu yaseCovadonga kunye nengcwaba ekucingelwa ukuba nguPelayo ngokwakhe. Ukuqhubeka nesiko, kuthiwa amaGoth abalekele kule ndawo kunye nemikhosi yakhe ngexesha loMlo waseCovadonga.
Emva kokundwendwela le ndawo intle, unganyuka uye echibini, ezikwiikhilomitha ezilishumi elinambini kuphela ukusuka apho. Ngokukodwa, zimbini, i-Ercina kunye ne-Enol kwaye zikummandla wendalo omangalisayo weentaba kunye neendawo eziluhlaza. Unako ukuya kubo ngemoto (ngokusikelwa umda) okanye ngeendlela ezintle zokunyuka intaba.
IPoncebos kunye neGarganta del Cares, omnye ummangaliso
IPoncebos yidolophu encinci esezintabeni nebhunga leCabrales oya kuthi ufike kuyo ujonge indawo entle. Izele ngumtsalane, kodwa owona mgangatho uphambili kukuba ubekwe kwelinye icala Indlela yeeNkathalo.
Olu tyelelo lukuhlanganisa UKayinSele ikwiphondo laseLeón, kwaye ubude bayo buqikelelwa kwiikhilomitha ezingama-22. Ikwabizwa ngokuba Umqala kaThixo kuba ihamba phakathi kweendonga ezinkulu zelitye lekalika, inamacandelo ayilwe ngesandla somntu.
Ukuthatha ithuba lokukhukuliseka komhlaba okuveliswe ngumlambo iCares, ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX iindawo zeliwa zafunyanwa ukuze zixhaphaze ubutyebi bamanzi besityalo saseCamarmeña. Iziphumo zaba yindlela yokunyuka intaba ngendlela emangalisayo kangangokuba iphakathi kweyona intle ehlabathini.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba yindlela emgceni, hayi eyetyhula. Oku kuthetha ukuba, ukuba uyiqala ePoncebos kwaye uzibona udiniwe, uya kuba nezinto ezimbini onokukhetha kuzo: ukubuyela kule dolophu okanye ukuqhubeka eCaín. Ngapha koko, ukhenketho luyamangalisa.
Phakathi kweendawo onokuzibona ukuba uyayenza, siza kuthetha njengemizekelo UMurallón de Amuesa okanye Ikhola yomgibe. Kodwa, ikhilomitha enye ukusuka ePoncebos, uya kuyifumana I-Bulnes ifuneka, esisisa kwenye indawo ukuze siyibone ePicos de Europa.
Bulnes kunye ne-Urriellu
INaranjo de Bulnes
Umgaqo kaloliwe okanye i-funicular ikusa kwidolophu entle ye Bulnes, nangona ungaya apho ngendlela yokuhamba nge Isitayile seTechu. Kuzo zombini ezi meko, xa ufika kule lali intle kangaka, kuya kuvuleka umboniso wendalo omangalisayo phambi kwakho.
Uya kuzifumana ujikelezwe ziincopho ezibonakala zikwamkela kwindawo enelungelo apho imeko yangoku ibonakala ingafikanga. Kodwa uya kubona izindlu zamatye zilungiswe kwiindlela ezenziwe ngamatye. Ukuba, ukongeza, unyukela kwi Ukuphakamisa, izimvo ziya kuba nomtsalane ngakumbi.
Njengokuba konke oku akwanelanga, iBulnes yenye yeendlela zokungena kwi Incopho yeUriellulu, eyaziwa njenge UNaranjo de Bulnes ngokubengezela okumangalisayo okwenziwa lilanga kule ntaba. Unokwenza indlela yokunyuka intaba ukuya kwindawo yokusabela kwaye, xa ulapho, ukuba uthanda ukunyuka, ukhwele phezulu, njengoko uneendlela ezininzi zokwenza njalo.
Kodwa ezinye iindlela zokunyuka intaba nazo ziqala ukusuka eBulnes. Phakathi kwazo, ezo zikusa kwifayile ye- Pandébano Col, i Sotres wa Umthombo we. Ngokuphathelele le yokugqibela, siza kuthetha ngayo kamva.
Desfiladero de la Hermida Kude kube ngoku, sikuxelele ngeendawo ezintle kwindawo ye-Asturian yePicos de Europa. Kodwa iCantabrian ayikude ngasemva ngokweemeko zendalo kunye neendawo ezizele ngumtsalane wendabuko.
Ubungqina obulungileyo boku ngumwonyo weHermida, obaleka kangangeekhilomitha ezingama-21 phakathi kweendonga zamatye amakhulu kunye neebhanki ze umlambo deva. Ngapha koko, lelona lide kulo lonke elaseSpain. Inendawo engaphezulu kwamawaka amathandathu eehektare ezihlelwe njenge Indawo yoKhuseleko ekhethekileyo yeentaka.
Kodwa umwonyo weHermida kubalulekile kwesinye isizathu. Kuphela kwendlela yokufikelela ukusuka elunxwemeni ukuya kwinto entle Ummandla waseLiébana, apho uya kufumana ezinye izinto ezininzi ukubona kwiPicos de Europa. Siza kukubonisa ezinye zazo.
I-Santo Toribio de Liébana Monastery
Ifumaneka kumasipala waseLebaniego de Chameleno, le monastery inyanzelisayo yindawo yohambo, njengoko kunjalo naseSantiago de Compostela (apha sikushiya inqaku malunga yintoni ongayibona kwesi sixeko). Njengecawa yaseGalician, ine Umnyango Woxolelo kwaye sisikhumbuzo sesizwe ukusukela ngo-1953.
Ukuba siza kuthathela ingqalelo isiko, yasekwa ngenkulungwane yesi-XNUMX nguToribio, owayengubhishophu wase-Astorga. Kodwa okubaluleke ngakumbi kumakholwa kukuba igcina ii ILignum Crucis, isiqwenga somnqamlezo awabethelelwa kuwo uYesu. Kukwaboniswa eminye imisebenzi ngabantu abadumileyo UBeatus waseLiebana.
Kwelinye icala, i-monastery lolona lwakhiwo luphambili lweseti egqibezela Umqolomba ongcwele, yesimbo sangaphambi kwamaRoma; ihermitages yaseSan Juan de la Casería kunye neSan Miguel, ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX ngokulandelelana, kunye namabhodlo eSanctuary yaseSanta Catalina.
Iipotes, omnye umangaliso wokuwubona kwiPicos de Europa
Kufuphi kakhulu nomzi weemonki waseSanto Toribio de Liébana yidolophu yasePotes, idolophu entle enodidi lwembali kwaye ikomkhulu lommandla waseLiébana.
Enye yezona zinto zinomtsalane siseti yezitrato ezimxinwa nezenziwe ngeentsimbi. Kuzo zonke, uya kubona izindlu ezidumileyo zommandla, ngakumbi kwi Indawo yaseSolana. Iibhlorho ezinje ngeSan Cayetano kunye neLa Cárcel nazo ziya kutsala umdla wakho.
Kodwa uphawu olukhulu lweePotes ngu Inqaba yeNtsana. Njengomdla, siya kukuxelela ukuba yayiyindlela ye-Manor IMarquis yaseSantillana, imbongi yamandulo yamaSpanish.
Kuya kufuneka undwendwele kwiiPotes Icawa yaseSan Vicente, olwakhiwayo lwenzeka phakathi kwenkulungwane yeshumi elinesine neyeshumi elinesibhozo kwaye, ke ngoko, idibanisa i-Gothic, Renaissance kunye ne-Baroque element.
Imoto yekhebula yeFuente Dé
Silugqiba ukhenketho lwethu lwePicos de Europa ngokukuxelela ngale dolophu incinci kumasipala waseCamaleño. Ime phantse kumakhulu asibhozo eemitha zokuphakama kwaye, ukufikelela kuyo, unokusebenzisa umtsalane Ikhefu kuthatha imizuzu emithathu ukwenza uhambo.
KwiFuente Dé unomdla imbono ekunikezela ngemibono emangalisayo yeentaba ezikufutshane neentlambo. Kodwa unokufika nasezidolophini ngokuhamba ngeendlela ezikwindawo entle. Phakathi kwabo, siza kukhankanya ukunyukela kwiAlto de la Triguera, ukujikeleza Peña Remonta okanye oko kubizwa ngokuba Iindlela ze-valiva kunye namazibuko ePembes.
Ukuqukumbela, sikubonise imimangaliso ethile iPicos de Europa. Nangona kunjalo, njengoko besikuxelele, zininzi ezinye ekufuneka sizishiyile kumbhobho. Phakathi kwabo, idolophu yase IArenas de Cabrales, eAsturias, kunye nezakhiwo zayo ezintle ezithandwayo kunye namabhotwe anjengeMestas neCossío; ezixabisekileyo Umwonyo weBeyos, ephawula ikhosi yomlambo iSella kunye nokwahlula ubunzima bentshona kulo lonke uluhlu lweentaba zaseCantabrian, okanye Incopho yeTorrecerredo, eyona ndawo iphakamileyo iPicos de Europa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Yintoni ongayibona kwiPicos de Europa